NSOGBU IGBO - Peeji nke 3 nke 43 - ELB TR REL NRỌ
MGBE ỌHỤRỤ Arts ARO ọzọ Ụlọ emekọ AKU NA UBA
Sony egbughi oge ya niile nnukwu fim nke afọ rue 2021 - BGR
Sony kwuputara na Mọnde na ọtụtụ n'ime fim ya kacha sie ike maka ịhapụ afọ a egbuola oge. Morbius, Ghostbusters: Afterlife, Peter Rabbit 2, na Inexplore niile kwagara na 2021 n'ihi…
10 iPhone na iPad ngwa ọdịnala na-enuba fim na ihe nkiri TV n'efu ...
Akpata nsogbu ọrịa ahụike doro anya na ọrịa ọrịa coronavirus ọhụrụ, ndị mmadụ n'ofe mba ahụ na-enwekwa nsogbu isi ike na-esochi oria CVID-19.
Netflix 'Tiger King' ewu ewu kwesịrị ịbụ ihe mmụta maka Apple
Tiger King na Netflix bụ ihe ngosi televishọn kachasị ama ama na United States. Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọwute ịrị elu na ọdịda nke ajọ azụ anụ eccentric mara dị ka Joe…
Nwee obi ụtọ njem ndị a na ogige ntụrụndụ site n'ụlọ gị n'oge kwarantaini…
Staynọrọ n'ụlọ n'oge ichekwa nke coronavirus ka anyị na-ewepụ mgbasa nke nje ekwesịghị ịbụ ihe na-agwụ ike. Ọwa vidiyo nke Disney World YouTube ebipụtala vidiyo 360-…
Roku na-enye ule oge n'efu nke Showtime, EPIX na ndị ọzọ - BGR
Roku esorowo ihe karịrị netwọk iri abụọ rụọ ọrụ iji nye ọnwụnwa na-enweghị nhịahụ ka onye ọ bụla rapaara n'ụlọ na-eche maka ọrịa ọnya na-efe efe ọhụrụ. Oge ihe ngosi, EPIX, ndu ndu, hallmark na…
John Krasinski na-akparịta ụka na "Officelọ ọrụ" Steve-Coll kpakpando na ihe nkiri ọhụrụ…
Na coronavirus na-achịkwa ozi ọma, "Officelọ ọrụ" kpakpando John Krasinski wepụtara usoro YouTube ọhụrụ lekwasịrị anya na akụkọ ndị na-ewuli elu. A na-akpọ usoro a 'Goodfọdụ Ezi Ozi Ọma' ma hazie ngwụsị izu a. Ndị mbụ…
Egwuregwu egwuruegwu "Mario" ga-abata na Switch na 2020 - BGR
Ekwuru na Nintendo agbazigharị ọtụtụ egwuregwu Mario ochie maka ndị Switch, gụnyere Super Mario 64, Super Mario Sunshine, na Super Mario Galaxy. Super Mario 3D World ga-enwe mbipụta Ọkachamma na ọtụtụ ọkwa ọhụụ.…
Netflix bịarutere ma ọpụpụ maka izu nke Mach 29, 2020 - BGR
Netflix nwere nnukwu izu ọzọ agbakwunyere ụdị ọhụụ 47 na-abịa ọrụ ịkwanye ọkụ, gụnyere oge nke anọ nke Money Heist. Enwekwara otutu ihe nkiri kpochapụwo na-apụta na Netflix…
Anyị maara na ị na-elele Netflix ebe ekwesịrị ka ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ
Ọrịa ọhụrụ coronavirus arụpụtawo nnukwu mgbanwe na ndụ ọrụ nke nde ndị America. Kpọtụrụ, ọtụtụ mmadụ na-arụ ọrụ n'ụlọ ugbu a. Akụkọ…
Budata ọsọ maka PlayStation nwayọ na U.S.
Ibudata ọsọ ga na PlayStation ejirila nwayọ ma gbue oge na Europe iji belata nrụgide nke ndị na-enye ọrụ n'etiti oria ojoo coronavirus. Sony kwupụtara n'izu a na ndị a…
gara aga 1 2 3 4 5 ... 43 esote